Al-Shabaab oo sheegtay inay dileen Xildhibaan ka tirsan Baarlamaanka Hirshabelle oo ay qafaasheen | HalQaran.com
Home Wararka Maanta Al-Shabaab oo sheegtay inay dileen Xildhibaan ka tirsan Baarlamaanka Hirshabelle oo ay...
Al-Shabaab oo sheegtay inay dileen Xildhibaan ka tirsan Baarlamaanka Hirshabelle oo ay qafaasheen
Muqdisho (Halqaran.com) – Ururka Al-Shabaab ayaa sheegtay inay dileen Xildhibaan Xaaji Maxamed Maxamuud oo ka tirsanaa baarlamaanka maamulka Hirshabelle, kaddib markii ay saaka ka afduubteen gaari uu la socday oo marayay inta u dhaxeysa magaalooyinka Jowhar iyo Balcad.
Baraha wararka ee dhinaca internet-ka ee taageera Ururka Al-Shabaab ayaa lagu baahiyay in Al-Shabaab ay qafaasheen xildhibaankaasi, ayna dileen.
Xildhibaankan oo magaciisa lagu sheegay Maxamed Maxamuud Siyaad ayaa laga qafaashay xilli gaariga uu maraayay meel ku dhaw deegaanka Gololey.
Wararka ayaa sheegaya, maleeshiyada Al-Shabaab ka tirsan ee qafaashay Xildhibaankaan in ay ku dileen deegaanka Yaaqle oo ka tirsan Gobolka Shabellaha Dhexe.
Gaariga uu la socday Xildhibaanka oo ahaa Baabuurta shacabka ayaa la sheegay inay kala soo dageen, kadibna ay fasaxeen dadkii saarnaa.
Ma jiraan ilaa iyo hadda wax war ah oo ka soo baxay maamulka Hirshabelle oo la xiriirta dhacdadaasi.
Xildhibaankii ay Al Shabaab afduubteen oo la dilay